သူမပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲစတင် လွှင့်ခါစမှာပဲ ပရိတ်သတ်အားပေးမှု အများအပြား ရရှိနေကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ဝေလာရီ – Maythadin
မွန်မင်းသမီးလေး ဝေလာရီကတော့ ” နှင်းဆီ ” ဆိုတဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဖခင်ကိုချစ်ခင်စိတ် နဲ့ မိထွေးဖြစ်သူကို မကျေနပ်မုန်းတီးစိတ်ဖြစ်လို့ အရွဲ့တိုက်တတ်သူမိန်းကလေး ‘မော်’ အနေနဲ့ ချစ် စဖွယ်ပါဝင်ထားသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲမှာပဲ
ပရိတ်သတ်အားပေးမှု ရ ရှိခဲ့ပြီး ” မော် ” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်လေးကို အားလုံးလက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ ဒုတိယဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တဲ့ ” မမှီဝဲနဲ့ ကင်းအောင်နေ ” ဆိုတဲ့ ပညာပေးဇာတ်လမ်းတွဲကို တော့ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့မှာ
???? ? ရုပ်သံမှတဆင့် စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်း ရဲ့ ပထမဆုံး အပိုင်း ၁ မှာတင် ပရိတ်သတ်အားပေးမှုကို တခဲနက် ရရှိခဲ့တာကြောင့် ပျော်ရွှင်ရတဲ့ အကြောင်းကို ဝေလာရီက အခုလိုပဲ သူမရဲ့ ?? ??? ကနေတဆင့် ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
သူမကတော့ ” အပိုင်း ၁ ကို ????? ???? ?????? ?? ? ?????? များလို့ ပျော်နေပါပြီ ” ဆို ကာ ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေလာရီကတော့ အဆိုတော် လိမ္မော်သီးရဲ့ ညီမငယ်လေး ဖြစ်တာနဲ့အညီ နယ်ရှိုးပွဲတွေမှာလည်း အမဖြစ်သူနဲ့အတူ သီချင်းဆိုလေ့ရှိတယ်
လို့လည်း အင်တာ ဗျူးတခုမှာ ဖြေဆို ခဲ့ဖူးပါတယ်။မွန်မင်းသမီးချောလေး ဝေလာရီကတော့ အောင်မြင်တဲ့အနုပညာလောကထဲကို ရောက်ရှိနေပြီ ဖြ စ်သလို လူချစ်လူခင်များတဲ့ မင်းသမီးလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးထိ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ် သတ်ကြီးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။
မှနျမငျးသမီးလေး ဝလောရီကတော့ ” နှငျးဆီ ” ဆိုတဲ့ ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲမှာ ဖခငျကိုခဈြခငျစိတျ နဲ့ မိထှေးဖွဈသူကို မကနြေပျမုနျးတီးစိတျဖွဈလို့ အရှဲ့တိုကျတတျသူမိနျးကလေး ‘မျော’ အနနေဲ့ ခဈြ စဖှယျပါဝငျထားသူလေး ဖွဈပါတယျ။ ပထမဆုံးဇာတျလမျးတှဲမှာပဲ
ပရိတျသတျအားပေးမှု ရ ရှိခဲ့ပွီး ” မျော ” ဆိုတဲ့ ဇာတျကောငျလေးကို အားလုံးလကျခံနိုငျအောငျ ကွိုးစားနိုငျခဲ့ပါတယျ။သူမရဲ့ ဒုတိယဇာတျလမျးတှဲဖွဈတဲ့ ” မမှီဝဲနဲ့ ကငျးအောငျနေ ” ဆိုတဲ့ ပညာပေးဇာတျလမျးတှဲကို တော့ နိုဝငျဘာ ၁၆ ရကျနမှေ့ာ
???? ? ရုပျသံမှတဆငျ့ စတငျထုတျလှငျ့ခဲ့ပါတယျ။ ဇာတျလမျး ရဲ့ ပထမဆုံး အပိုငျး ၁ မှာတငျ ပရိတျသတျအားပေးမှုကို တခဲနကျ ရရှိခဲ့တာကွောငျ့ ပြျောရှငျရတဲ့ အကွောငျးကို ဝလောရီက အခုလိုပဲ သူမရဲ့ ?? ??? ကနတေဆငျ့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
သူမကတော့ ” အပိုငျး ၁ ကို ????? ???? ?????? ?? ? ?????? မြားလို့ ပြျောနပေါပွီ ” ဆို ကာ ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဝလောရီကတော့ အဆိုတျော လိမ်မျောသီးရဲ့ ညီမငယျလေး ဖွဈတာနဲ့အညီ နယျရှိုးပှဲတှမှောလညျး အမဖွဈသူနဲ့အတူ သီခငျြးဆိုလရှေိ့တယျ
လို့လညျး အငျတာ ဗြူးတခုမှာ ဖွဆေို ခဲ့ဖူးပါတယျ။မှနျမငျးသမီးခြောလေး ဝလောရီကတော့ အောငျမွငျတဲ့အနုပညာလောကထဲကို ရောကျရှိနပွေီ ဖွ ဈသလို လူခဈြလူခငျမြားတဲ့ မငျးသမီးလေးလညျး ဖွဈပါတယျ။ အဆုံးထိ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျ သတျကွီးကို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျရှငျ။
ကိုဗစ်​ရောဂါ​ကြောင့်ကွယ်လွန်သွားရရှာ​သော ညီမဖြစ်သူရဲ့ခင်ပွန်းအတွက် သက်ပျောက်ဆွမ်းကပ်ပေးခဲ့တဲ့ နန္ဒလှိုင်
ဈေးရောင်း​ပေးလို့ရတဲ့ အနုပညာကြေးတွေနဲ့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စုများစွာအား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက် လှူဒါန်း​ပေးခဲ့တဲ့ မေလသံစဉ်